Shina: CCTV ambanin’ny afon’ny… tsikera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Septambra 2018 5:02 GMT
Tena nitsongo tsara ireo fanehoankevitra an-tambajotra nalefan'ireo shinoa mpampiasa aterineto mikasika ilay firehetan'ny CCTV ireo very tamin'ny tombantombana. Fa, raha ny marina, tamin'ny fotoana nanombohan'ny manampahefana nanivana ireo vaovao marimpototra tao amin'ny tontolon'ny aterineto shinoa, nampiasa ireo fomba fiseraserana hafa mba hizarana ny hevitr'ireo olontsotra.
Ny 10 febroary, nahazo SMS avy amin'ny iray amin'ireo namako akaiky aho, izay ahitana laharan'andalan-tononkalo nentim-paharazana shinoa, izay miparitaka ao amin'ny aterineto amin'izao fotoana izao :
Andininy voalohany : Nampalaza an'i Xiao Shenyang ny ‘gala’-n'ny Fetin'ny Lohataona
Andininy faharoa : Nampirehitra ilay tranobe miendrika baoty ny afomanga natao tamin'ny fetin'ny Harendrina
Lohateny : tsy mba lany vola mihitsy ny CCTV
Mifarana amin'ity famintinana ity ilay hafatra :
Ho an'ny olombelona iray, aza mba CCTV be loatra. Raha tsy izany, tsy maintsy ho voasazy na dia afaka hovelona aorian'ny Taombaovao shinoa aza.
Ny 12 febroary, nahazo imailaka avy amin'i Atoa. Yue (岳先生) aho, izay manambatra karazana fanehoankevitra sy sary mivantana momba ilay afo. Nilaza ny iray tamin'ireo maribolana hoe:
ena manankarena loatra i CCTV ka afaka mandrehitra ireo tranobeny mba hankalazana ny Fetin'ny Harendrina, raha toa ka tsy afaka na dia hividy tsipoapoaka aza ny sasany.
Lazaina ao anatin'izany ny fanehoankevitry ny mpampiasa aterineto iray hafa momba ny asa ratsin'ny CCTV :
Nampianatra antsika hatrany hanao ny marina sy hanaja ny lalàna ireo haino aman-jery nentim-paharazana shinoa. Fa ankehitriny, ianareo no nanolana izany lalànantsika izany tamin'ny fomba miseho mibaribary loatra. Tena mahatsapa ho tsy manana fanantenana mihitsy izahay izao !
Amin'ny fomba tsy nampoizina, feno fanantenana mikasika izay ho vokatr'ilay afo ny mpaneho hevitra iray :
Mety hamporisika ny fangatahantsika ato anatiny ary hanohana ny fitomboan'ny Harin-karena Faobe antsika amin'ny fotoana mahamety azy ny fahasimbana sy ny fanarenana ny tranoben'ny CCTV. Amin'izany fotoana izany ihany, hiteraka asa an-tselika ho an'ireo mpiasa mpifindra monina maro izany. Mila omena valisoa goavana ireo nahavanon-doza.
Misy olona tsy faly amin'ny fahombiazana arak'asa vitan'ny CCTV :
Tonga ara-potoana ary tsy tapaka ireo vaovao natolotry ny CCTV mikasika ny 11 septambra amerikana, fa tena fohy sy manidintsidina ireo vaovao natolotry ny CCTV momba ny firehetany. Mba toetsaina inona izany ? Avy amin'ilay toetsaina be voninahitry ny «fanadinoana ny tena amin'ny fitiavana ny hafa» ve ?
Mba hisintonana anatra avy tamin'ilay firehetana, manolo-kevitra amin'ny fomba politika ny olona iray :
Mba mihinana pilina misy ny soratra hoe Demokrasia rehefa mijaly noho ny fivontosana ny mikrô !
Fa tena atahorako ny handraisana ireo eson'ny shinoa ireo ho toy ny ratsy, mafy fo sy ho feno habibiana. Raha ny marina, maneho ny ahiahin'ireo olontsotra momba iny firehetana iny, ny fangorahany ny maty sy ny naratra, ny hatezerany amin'ny CCTV sy ny fitiavany ny tanindrazany ireo esoeso miendrika hatsikana eo ambony ireo.